Golaha wasiirada cusub oo badankood la filaayo in laga keeno gudaha barlamaanka iyo wasiiradii horey uga mid ahaa xukuumadii la eryay ee R/Wasaare Saacid – idalenews.com
Golaha wasiirada cusub oo badankood la filaayo in laga keeno gudaha barlamaanka iyo wasiiradii horey uga mid ahaa xukuumadii la eryay ee R/Wasaare Saacid
Si golaha cusub ee la soo dhisaayo kalsooni looga helo barlamaanka Soomaaliya marka la horgeeyo isla markaasna madaxweynuhu uga dhabeeyo balanqaadyadii uu la galey xildhibaanadii qeybta ka ahaa ridistii xukuumadii Ra’iisul Wasaare cabdi Faarax shirdoon Saacid ayaa waxaa masuuliyiinta sare ee dowlada isla garteen in Xukuumada Cusub ee Ra’iisul Wasaare Cabdiwali Sheekh Axmeed laga keeno barlamaanka gudahiisa, iyadoo sidoo kalena ay jiraan tiro aad u yar oo dibada barlamaanka laga keenaayo balse haysta kalsoonida xubnaha barlamaanka beelahooda iyo qaar ka mid ah wasiiradii xukuumadii la ridey ee Ra’iisul Wasaare Saacid Shirdoon.
Wasiirada xukuumadii Saacid ee la filaayo in qaar ka mid ah dib loo soo celiyo ayaa waxaa ka mid ah C/kariin Xuseen Guuleed, Fowziyo Yuusuf Aadan, Maryan Qaasim, C/xakiin Fiqi, C/llaahi Abyan Nuur, hase ahaatee ay suurtogal tahay in wasaaradaha loo kala bedelo.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo aanu heleyno Golaha Wasiirada cusub ayaa noqonaya kuwii ugu badnaa abid Xukuumadihii u dambeeyay ee dalka soo maray, waxaana ay gaarayaan ilaa 55-Wasiir oo isugu jira Wasiir kuxigeeno iyo wasiiru dowlayaal, iyadoo Wasiirada buuxa ay yihiin 25-Wasiir. Inta badana yihiin xildhibaano ka tirsan barlamaanka iyo wasiiro ka tirsan xukuumadii Saacid.
Sidoo kale waxaa jira xubno wasiir ku xigeeno iyo wasiiru dowlayaal ka ahaa xukuumadii Ra’iisul Wasaare Saacid oo iyaguna la filaayo inay noqdaan wasiiro buuxa waxaa xubnahaasi la sheegayaa iney yihiin, wasiiru dowlihii Madaxtooyada, Wasiiru dowlihii Arrimaha Dibada, wasiiru dowlihii Maaliyada iyo wasiiru ku xigeenkii wasaarada gaashaan dhigga C/raxmaan Dheere, kuwaasoo intooda badan ahaa xildhibaano iyo wasiir ku xigeeno ka tirsanaa xukuumadii la ridey ee Ra’iisul Wasaare Saacid.
Waxaa iyaga la sheegayaa in xubno fara ku tiris ah la keenaayo dibada barlamaanka balse iyaga naf ahaantooda horey uga mid noqday xukuumadahii kmg ee dalka soo marey sida Xuseen Cabdi Xalane oo isaugu bedeli doona C/hi Cilmooge Xirsi iyo Mustaf dhuxulow oo laga yaabo inuu bedelo Wasiiru dowlihii Arrimaha Dibada Gacal.
Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibada Gacal ayaa la sheegayaa in loo wado inuu noqdo Safiirka Somalia ee dalka Turkiga waase haddii Dhuxulow oo ay isku beel yihiin xil wasiirnimo looga magacaabo golaha wasiirada cusub.
Inkastoo wax walba is bedeli karaan, hadana hadal heynta ugu badan ee laga helayo Xafiisyada Mas’uuliyiinta dowladda ayaa ah in xubnahan magacyadooda aan soo bandhignay ay yihiin kuwo ugu dhow ee ka soo muuqanaya liiska Golaha Wasiirada cusub.
Isku soo wada dhuuboo, waxa dad badan oo Soomaaliyeed shaki ka muujinayaan isbedelka ay la imaan karaan xukuumad iyo xubno barlamaan oo horey loo arkey waxqabadkooda, waxayna ku tilmaameen haddii saadaasha noqoto sida aan soo sheegney in sheekada dowlada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la mid noqoto Waan socon weynaye aan orodno.
Idale News Online, Mogadishu, Somalia.
Ciidamo dadka deegaanka degmada Afgooye ku haayey dhibaatooyin joogta ah oo intooda badan laga saaray gudaha degmada